သင်၏အားလပ်ရက်များကိုမျှဝေပါ - Galveston County အစားအသောက်ဘဏ် သင်၏အားလပ်ရက်များကိုမျှဝေပါ - Galveston County အစားအသောက်ဘဏ်
Galveston ကောင်တီစားနပ်ရိက္ခာဘဏ်၏အဓိက ၀ ဘ်ဆိုဒ်သို့ပြန်သွားရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ
42 နှစ်မြောက် ABC13 Share Your Holidays Food Drive ပွဲကို ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အင်္ဂါနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက် နံနက် ၈ နာရီမှ ၁၂ နာရီအထိ။
GALVESTON ခရိုင်အစားအစာဘဏ် - စီမံခန့်ခွဲသူအဆောက်အအုံ
SYH အစားအစာ drive
မည်သူသည် SYH အစားအသောက်မောင်းနှင်မှုကိုလက်ခံမည်နည်း။
ABC13 Share Your Holidays အဖွဲ့နှင့် လက်တွဲပြီး အစားအသောက် မောင်းနှင်မှုကို စီစဉ်ပေးလိုသူ မည်သူမဆို ကျွန်ုပ်တို့ ကြိုဆိုပါသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးဆက်သွယ်ပါ Robyn Bushongသင်၏အားလပ်ရက်များ အစားအသောက်ဒရိုက်ကို မျှဝေရန်အတွက် ကွန်မြူနတီလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ ညှိနှိုင်းရေးမှူး၊ 409.744.7848 သို့မဟုတ် rbush1147@aol.com ပိုမိုသိရှိလိုပါကအဘို့နှင့်မည်သို့ပါဝင်ပတ်သက်ရ။
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် - တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများဖြစ်သော -
သင်စုဆောင်းလိုသော အစားအစာအတွက် ပန်းတိုင်တစ်ခုကို ရွေးပါ။
Robyn Bushong ကို 13 သို့ ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် သင်၏ အားလပ်ရက်များ အစားအသောက် Drive ကို မျှဝေပါ ABC409.744.7848 အတွက် မှတ်ပုံတင်ပါ သို့မဟုတ် rbush1147@aol.com ။
သင်၏အဖြစ်အပျက်ကိုအက္ခရာများ၊ အီးမေးလ်၊ လက်ကမ်းကြော်ငြာများနှင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များမှတစ်ဆင့်အခြားသူများအားအသိပေးရန်သင့် Drive ကိုမြှင့်တင်ပါ။ (မည်သည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပစ္စည်းများနှင့်မဆို GCFB လိုဂိုကိုသေချာစွာထည့်ပါ။ )
ကျွန်ုပ်၏ SYH အစားအစာ drive ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ကြော်ငြာရမည်နည်း။
ဤစာမျက်နှာတွင် download လုပ်နိုင်သောမြင့်မားသော resolution ရှိသောတရားဝင် GCFB လိုဂိုရှိသည်။ သင်၏အစားအစာမောင်းနှင်ပွဲအတွက်သင်ပြုလုပ်သောမည်သည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပစ္စည်းများပေါ်တွင်မဆိုကျွန်ုပ်တို့၏တံဆိပ်ထည့်ပါ။
ငါတို့သည်သင်တို့၏ဖြစ်ရပ်ကိုထောကျပံ့ပေးချင်ပါတယ်! သင်၏လက်ကမ်းကြော်ငြာများကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်မျှဝေပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများတွင်သင်၏ဖြစ်ရပ်ကိုမြှင့်တင်နိုင်သည်။
ငါ့ဘယ်မှာယူရမလဲ SYH လှူဒါန်းခြင်း?
လှူဒါန်းမှုအားလုံးကိုမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုပေးပို့နိုင်သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက် အင်္ဂါနေ့ နံနက် ၈ နာရီမှ ၁၂ နာရီအထိ။
Ball High School တွင် - 4115 ရိပ်သာလမ်းအို, Galveston
GCFB - တက္ကဆက်စီးတီး၊ ၂၁၃ ၆ လမ်းမြောက်
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော SYH လှူဒါန်းမှုပုံစံကို အသုံးပြု၍ ငွေကိုငွေသား၊ ချက်လက်မှတ်သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းအနေဖြင့်ရယူနိုင်သည်။
စစ်ဆေးမှုများအတွက်ကျေးဇူးပြု၍ Galveston ကောင်တီစားနပ်ရိက္ခာဘဏ်သို့ ကျေးဇူးပြု၍ ပေးပါ။ ချက်လက်မှတ်၏ဘယ်ဘက်အောက်ခြေရှိသင့်အဖွဲ့အစည်း / အဖွဲ့အမည်ကိုသတိပြုပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်၏အဖွဲ့အစည်း / အုပ်စုသည်အကြွေးရလိမ့်မည်။
အွန်လိုင်းအတွက်အလှူငွေများကို ဤစာမျက်နှာ၏ ထိပ်တွင် ဖောင်ပေါ်တွင် လက်ခံနိုင်ပါသည်။ သင့်အလှူရှင်များနှင့် အီးမေးလ်ဖြင့် url link၊ https://www.galvestoncountyfoodbank.org/shareyourholidays/ ကို မျှဝေနိုင်ပါသည်။
နံနက် ၉ နာရီမှညနေ ၃ နာရီ (အင်္ဂါနေ့ကြာသပတေးနေ့)
နံနက် ၉ နာရီမှည ၁၂ နာရီ (သောကြာနေ့)
အုပ်ချုပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုအဆောက်အ ဦး များ
2136လမ်း N. , တက္ကဆက်စီးတီး
Galveston ကောင်တီစားနပ်ရိက္ခာဘဏ်သည်အကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အဖြစ် ၅၀၁ (ဂ) (၃) အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ထားသည်။ အလှူငွေများကိုဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသောအတိုင်းအတာအထိအခွန်နှုတ်ယူနိုင်သည်။
Galveston ကောင်တီစားနပ်ရိက္ခာဘဏ်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုရိုးသားဖြောင့်မတ်စွာလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ယုံကြည်သည်။ မီးပြတိုက်ဝန်ဆောင်မှုများ Galveston ကောင်တီစားနပ်ရိက္ခာဘဏ်အားစားနပ်ရိက္ခာဘဏ် ၀ န်ထမ်းများအပါအ ၀ င်ရပ်ရွာလူထုအတွက်ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်ဤအခြေခံမူများကိုထိန်းသိမ်းရန်ခွင့်ပြုထားသော Galveston ကောင်တီစားနပ်ရိက္ခာဘဏ်အုပ်ချုပ်ရေးသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိုထိန်းသိမ်းထားစဉ်ပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ထံသို့လျှို့ဝှက်အစီရင်ခံစာများကိုခွင့်ပြုသည်။ စံချိန်စံညွှန်းများ။